नेपाली मन्दिर बनाउन पैसा खर्च गर्छन् तर आविष्कारमा गर्दैनन्–महावीर पुन (अन्तर्वार्ता) « Swadesh Nepal
म्याग्दीको नाङ्गी गाउँमा जन्मेर नेब्रास्का विश्वविद्यालयमा पढ्नुभयो, पारिवारीक अबस्था बताइदिनुस् न ? कसरी यो स्थानसम्म पुग्नुभयो ?
मनुष्यको चोला लिएर जन्मिएपछि चोला भयो, मरेपछि गयो । मानिस जन्मेपछि विभिन्न अबस्थाबाट गुज्रीनुपर्ने हुन्छ । संसारमा रहेका सबै जीवजन्तुहरुको एउटाको अर्कोसँग मिल्दैन, जहाँसम्म मेरो कुरा छ, सयौ मोडहरु पार गरिसके । धेरै मोडहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जीवनमा मोडहरु आएपछि नमोडिइ सुखै छैन । तपाईले भनेजस्तै म दुर्गमा गाउँमा हुर्केको मान्छे । म अहिले धेरै स्कूलहरुमा विद्यार्थीहरुसँग अन्तरक्रियाका लागि गइरहेको हुन्छु ।
मेरो कथा भन्दा विद्यार्थीहरुलाई अचम्म पनि लाग्छ । यस्तो पनि सम्भव होला र भन्ने पनि लाग्छ होला । म सानो छँदा भेडा चराएर हिँडेको मान्छे हो । मेरो जमानामा गाउँघरमा बस्ने सबै बालबालिकाहरु यस्तै अबस्थाबाट गुज्रे । हाम्रो गाउँमा केटाकेटीहरुलाई भेडा चराउने जिम्मा दिइन्थ्यो । जुन आजभन्दा ५०/६० वर्षअघिको कुरा हो । जुनजुन गाउँमा अभिभावकहरु हुन्छन्, तिनीहरुले साक्षर बनाउन विद्यालय खोल्ने चलन हुन्थ्यो, त्यस्तैअनुसार हाम्रो गाउँमा विद्यालय खोलेपछि शिक्षक नभएका कारण अभिभावकहरु आफैंले पढाउने गर्थे ।
– कति वर्षको उमेरमा विद्यालय जान थाल्नुभयो ?
त्योत ६/७ वर्षको उमेरतिर गएँ होला । २०२० सालभन्दा अघि नेपालमा पाठ्यपुस्तक थिएनन् । नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल चलिरहेका बेला विद्यालय स्थापना गर्ने भन्ने नै थिएन । अभिभावकहरु आफै जागरुक भएर विद्यालय खोलेपनि पाठ्यपुस्तक थिएनन् । गाउँले तहमा खोलेको विद्यालयलाई पछि हामीले पढ्दापढ्दै सरकारले मान्यता दियो । तर ७ कक्षासम्म हामीले पाठ्यपुस्तकविहीन अबस्थामा पढेका हौँ ।
– के पढ्नुभयो पाठ्यपुस्तक नै नभएपछि ?
बुढापाकाले हामीहरुलाई आफुलाई थाहा भएको कुरा विद्यालयमा पढाउँथे । हामीले पनि काठको पार्टीमा उनीहरुले कालोपाटीमा जे लेख्थे, त्यही लैख्थ्यौँ । उनीहरुले दिउँसो पढ्नेभन्दा खेलाउने र कथाहरु सुनाउने गर्थे । स्कूल जाँदा खेल्न पनि पाइने, कथा पनि सुन्न पाइने भएपछि हामी स्कूल जाने गरेका थियौँ । कक्षा ८ मा पुगेपछि बल्ल हामीले कितावमार्फत् पढ्न लागेको हो ।
– पिताजीहरु लाहुरतिर हुनुहुन्थ्यो कि गाउँमै नि त्यो बेलामा ?
वुवा पेन्सनमा आइसक्नुभएको थियो । त्यहाँमात्रै होइन, नेपालको पहाडी क्षेत्रमा पढाउने भन्ने चलन थियो । जुन २०२० सालभन्दा अघिको कुरा हो । तर मेरो बुबामात्रै कहाँबाट कसरी सोच्नुभयो थाहा छैन, उहाँले चाँहि मलाई हाइस्कूल पढाउन चितवन ल्याउनुभयो । म्याग्दीका केही मान्छेहरु चितवन बसाइसराई गरेका थिए । त्यसैकारणले मलाई चितवन ल्याउनुभएको थियो । कक्षा ९ मा भर्ना हुँदा मैले पहिलोपटक चप्पल लगाएको हो । मैलेमात्रै होइन, नेपालको अधिकांश क्षेत्रका मानिसले त्योबेलामा जुत्ताचप्पल लगाउँदैन थिए ।
उतिवेला शुरु गरेको चौरी पाल्ने, माछा पाल्ने, नेपाली हातेकागज बनाउने, जाम बनाउने, मौरी पाल्ने, चीज बनाउने, पर्यटनको लागि लजहरु खोल्ने लगाएतका कामहरु शुरु गरेँ । जुन अहिलेसम्म पनि सफलता पनि पाइरहेको छ ।
जुत्ताचप्पल लगाउने भनेको कर्मचारी र हुनेखानेले मात्रै थियो । म १४ वर्षको हुँदा चप्पल लगाएर स्कूल गएका बेला कुन चप्पल कुन खुट्टामा लगाउने भन्ने सिक्नका लागि निकै समस्या भयो । तर पढाइमा भने म राम्रै थिएँ । मैले एसएलसी पास गरेँ । पास भएपछि त्यो बेलाको शिक्षकहरुले काठमाडौमा गएर विज्ञान पढ्न सुझाव दिए । काठमाडौँ आएर अमृत साइन्स कलेजमा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न भर्ना भएँ, तर हामी गाउँमा पढेको मान्छे, अस्कलमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई हुने, मलाई निकै समस्या पर्‍यो । तर आइएस्सी राम्रोसँग पास भएँ ।
पास भएपनि पनि मेरो अध्ययन त्यो भन्दा अघि जान सकेन । १२ कक्षा पास भएपछि ब्याचलर पढ्न सकिन । मेरो बुबासँग पैसा छैन भन्ने थाहा पाएपछि आफैले निर्णय गरेर ब्याचलरमा भर्ना गरिन । बुबाले पढाउन खोज्नुभएको थियो । तर म चितवनमा गएर शिक्षक भएँ ।जहाँ मैले १३ वर्ष ४ वटा हाइस्कूलमा पढाएँ । १८ वर्षको उमेरमा आइएस्सी पास गरेको थिएँ । ३१ वर्षको उमेरमा अब कलेज पढ्न जाने मोड आयो, त्यो पनि अमेरिकामा पढ्न जाने मोड आयो । अमेरिका जानका लागि अहिलेजस्तो कुनैपनि कन्सल्टेन्सीहरु थिएनन् । अनि न्यूरोडमा अमेरिकन लाइब्रेरी रहेको कुरा थाहा पाएँ ।
जसले अमेरिका जानका लागि सल्लाह सुझाव दिने रहेछ । जुनबेला मसँग एकपैसा पनि थिएन । मैले छात्रवृत्ति खोजेर अमेरिका जान खोजेपनि २ वर्षपछि मात्रै अमेरिका पढ्न जाने छात्रवृत्ति पाए । अमेरिका गएर ब्याचलर लेभलमा भर्ना हुँदा ३३ वर्षको थिएँ । तर यो कुरा सुनाउँदा कतिपयलाई विश्वास लाग्दैन, जिन्दगी भनेकै त्यही हो । अमेरिकामा गएपछि त पढ्नेभन्दा अर्को काम गरिन । म उमेरले पाको भएका कारण त्यहाँको प्रोफेसरहरु साथीजस्तो भए । बुढेसकालमा पढ्न गएको भएकाले सकेजती पढेँ । पटक–पटक गरेर ७ वर्ष अमेरिकामा बसेँ ।
ब्याचलर लेभलका लागि ३ वर्ष बसेँ, त्यसपछि नेपाल आएर समाजसेवामा लागेँ । तर ब्याचलर पास गरेपछि मैले नेपालमा गएर जागिर नखाने निर्णय गरिसकेको थिएँ । जागिर खानुपरे अमेरिकामा खाने भनेको थिएँ, तर अमेरिकाका जिन्दगी पनि काम नगरी खान नपाइने खालको थियो । कसैको अण्डरमा बसेर जागिर खानु भनेको स्वतन्त्र बस्न नपाइने भएकाले सकभर जागिर नखाने निर्णय गरेको थिएँ । नेपालमा आएर पनि जागिर खोज्ने काम गरिन । केही सिप लागेन भने जागिर खानैपर्ने भयो भने अमेरिकामा गएर मात्रै जागिर खाने भन्ने मनसाय थियो ।
मैले कैले पनि पूर्वयोजना बनाउने गरेको छैन । प्रिप्लान भनेको कस्तोले गर्ने हो भने सबै स्रोत र साधन भएकाले मात्रै गर्ने हो । जसको सम्पत्तिको नाममा आफ्नो शरिरमात्रै छ, त्यसले प्रिप्लान गरेर फाइदा छैन । त्यसैले म नेपाल आउँदा कुनै पनि योजना थिएन । नेपाल आएर केही सिप लागेन भने अमेरिका गएर जागिर खाने भन्नेमात्रै थियो ।
-के चिजले तपाईलाई ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना बनाउनुभयो त ?
ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेट ल्याउने भन्ने सोँचेर नेपाल आएको होइन । नेपालमा आएर यसरी काम गर्छु भनेर आएको पनि होइन । मैले कैले पनि पूर्वयोजना बनाउने गरेको छैन । प्रिप्लान भनेको कस्तोले गर्ने हो भने सबै स्रोत र साधन भएकाले मात्रै गर्ने हो । जसको सम्पत्तिको नाममा आफ्नो शरिरमात्रै छ, त्यसले प्रिप्लान गरेर फाइदा छैन । त्यसैले म नेपाल आउँदा कुनै पनि योजना थिएन । नेपाल आएर केही सिप लागेन भने अमेरिका गएर जागिर खाने भन्नेमात्रै थियो ।
नेपाल आएर सबै क्षेत्रमा घुमे, संयोगवश म आफै जन्मेको स्थानमा पनि पुगें । घुम्दैजाँदा गाउँमा जाँदा गाउँलेहरुले हाइस्कूल खोल्नका लागि प्रयास गरिरहेको थाहा पाएँ । जुन स्कूलमा १४ वर्षसम्म पढेको थिए । तर अमेरिका पुगेर फर्किदासम्म पनि स्कूलको अबस्था उस्तै थियो । विद्यालय खोल्नका लागि मलाई सहयोग मागेका थिए । उनीहरुले पैसा मागेका थिए । तर मसँग पैसा त थिएन, मैले स्कूलमा पढाइदिन्छु भने । त्यसपछि उनीहरु खुसी भए । विद्यालय पढाउनका लागि म जिल्लामै बसेँ । मैले सोचेको थिएँ, २/४ वर्षका लागि मात्रै बस्छु भनेर । तर बस्दैजाँदा समस्याहरु देखेँ ।
विद्यालयमा मात्रै गाउँभरि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगाएतका समस्या देखेँ । स्कूलमा पढाउन थालेपछि स्वास्थ्यका लागि क्लिनिक कसरी बनाउने भन्ने, आयस्रोत बढाउनका लागि सम्भव हुने सबै काम गरियो । उतिवेला शुरु गरेको चौरी पाल्ने, माछा पाल्ने, नेपाली हातेकागज बनाउने, जाम बनाउने, मौरी पाल्ने, चीज बनाउने, पर्यटनको लागि लजहरु खोल्ने लगाएतका कामहरु शुरु गरेँ । जुन अहिलेसम्म पनि सफलता पनि पाइरहेको छ ।
यस्तो काम गर्नका लागि कुनै पनि शिक्षा आवश्यक थिएन । यस्तो काम गरिरहेका बेला अमेरिकाबाट फर्केको ८ वर्षपछि गाउँमा कम्प्युटर र इन्टरनेट लैजाने विषय सोचेको हो । मैले इन्टरनेट लैजाँदा नेपालका प्रमुख शहरहरुमा मात्रै इनटरनेट शुरु भएको थियो । अन्य स्थानमा कतैपनि सेवा शुरु भएको थिएन । फोनको सेवासमेत गाउँमा पुगेको थिएन । फोन गर्न सबै मानिस जिल्ला सदरमुकाममा जानुपर्ने अबस्था थियो ।
– त्यसकालागि साधन स्रोत र जनशक्ति कसरी जुटाउनुभयो ?
त्यो त सबै मैले गर्ने काम समुदायका लागि थियो । समुदायका लागि गरिने काम समुदायले नै साधन स्रोत जुटाउँछ । मैले सरकारी निकाय वा एनजीओ, आइएनजीओसँग सहयोग मागिन । किनभने सहयोग मागेपनि पाउने अबस्था थिएन । एनजिओ भनेको कस्तो भनेको भने पहुँच हुने स्थानमा मात्रै उनीहरुले लगानी गर्छन् ।
– सरकारले सहयोग गर्दैन भन्ने कसरी लाग्यो, नेपालमा एनजिओ आइएनजिओको भुमिका कस्तो लाग्यो ?
पहिलो कुरा हातेकागज बनाउने सम्भावना गाउँमा देखेँ । तर त्यति ठूलो सम्भावना भएको स्थानमा मैले सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने अबस्था थियो । तर एक वर्षपछिसम्म पनि मैले अनुमति पाउनै सकिन । दोस्रो १९९८ मा नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष मनायो ।१९९७ मा मैले इको टुरिजमको योजना बनाएँ, नयाँ ट्रेकिङ रुट बनाउने विषयमा लज बनाउने भनेर ३ स्थानमा सरकारी जग्गाका लागि अनुमति लिनका लागि एकवर्षभन्दा बढि समय लाग्यो तर पाइन । त्यसैकारण सरकारी सहयोग पाउन कठिन लाग्यो ।
– गैरसरकारी संस्थाको धेरै आलोचना हुने गरेको छ, तपाईको अनुभव कस्तो लाग्यो ?
यो कस्तो भने नेपालमा यो व्यवसायका रुपमा रहेको देखिएको छ । तर केही नगण्यमात्रामा मात्रै राम्रो उद्धेश्यका लागि काम गरिरहेका छन् । अधिकांशका लागि व्यवसाय बनेको छ । नेपालमा अरु व्यवसाय गर्न त सम्भव छैन, त्यसैले गैरसरकारी संस्था खोलेर व्यवसाय चलाएका छन् । जुन उनीहरुका लागि बाध्यता हो । जस्तो नेपालमा हाम्रो पालामा निजी विद्यालय खोल्ने अबस्था थिएन, तर अहिले नीजि विद्यालय च्याउसरि खुलेका छन् ।
विद्यालय शिक्षालाई व्यवसायका रुपमा लिइएजस्तै गैरसरकारी संस्था पनि व्यवसायजस्तै बनेका छन् । अहिले अस्पतालहरु खोलिएको छ, अरु काम छैन नि नेपालमा, अस्पताल स्कूल, एनजीओ खोल्ने मात्रै काम भइरहेको छ । रोजगारी सिर्जना लागि कुनै पनि उद्योग खोल्न सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्न खोज्नेहरुलाई सरकारले हतोत्साहीत गरिरहेको छ । आफ्नो जिविका लागि केही न केही गर्नुपर्ने अबस्था आएपछि गैरसरकारी संस्था खुल्न थाले ।
– जुन अबस्थामा नेपाल छ, तपाई तल्लो तहबाट आएर क्रियाशिल भइरहनुभएको छ । एउटा समुदायलक्षित भएर काम गरिरहनुभएको छ । केही सम्भावनाहरु पनि छ कि समस्या मात्रै छ ?
हैन, जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ सम्भावनाहरु पनि हुनेगर्छ । समस्या नहुने ठाउँमा सम्भावना कम हुन्छ । नेपालजस्तो गरीब देशमा सम्भावना प्रचुर मात्रामा भएको देश हो । तर त्यो सम्भावनालाई ग्रहण गर्नसक्नुपर्‍यो ।
– तर गलत राजनीतिक प्रवृत्ति र परम्परागत कर्मचारी संयन्त्र छ कसरी सम्भव होला र ?
राजनीति र कर्मचारी संयन्त्र भनेको अस्थायी संरचना हो । संसारमा कतैपनि अनन्तकालसम्म राजनीति पनि गरेको छैन, कुनै संयन्त्र पनि अनन्तकालसम्म चलेको छैन । जसले काम गर्छ त्यो चल्दै जान्छ । राजनीति राम्रो भएन, कर्मचारी राम्रो भएन भन्दापनि उनीहरुले रोकेर रोकिँदैन, समयअनुकुल अघि बढ्दै जान्छ ।
दिमाग भएको मान्छेहरु राख्नका लागि ठाउँ त चाहियो, त्यो आविष्कार केन्द्र हो । अहिले नेपालमा कसैलाई केही नयाँ आयडिया आयो भने कहाँ गएर बनाउने कुनै ठाउँ छैन । सरकारी र गैरसरकारी तवरमा कुनैपनि स्थान छैन । आविष्कार केन्द्र त उदाहरणका लागि मात्रै गरिएको हो, देशैभर यस्ता केन्द्र हुनुपर्छ ।
– तपाईलाई चाँहि नेपालको राजनीतिले आकर्षण गर्न सकेन ?
देशलाई समृद्ध बनाउन राम्रो राजनीति चाहिन्छ तर नेपालको मामिलामा त्यो हिसाबले चलेको छैन ।
– कुनै समयमा राजनीतिमा पनि सोच राख्नुहन्छ कि ? हुन त तपाई योजनामा विश्वाश नगर्ने भनेर भनिसक्नुभयो ?
मैले प्रष्टसँग भन्ने चाँहि के हो भने, नेपालको राजनीति जुन हिसाबले चलेको छ, संस्कार नै कस्तो भयो भने परिवार व्यक्ति र समूहका लागि राजनीति भन्ने भइरहेको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहदेखि यता हेरौँन, रणबहादुर शाहको पालमा भित्रभित्रै यतिधेरै गुटबन्दी भयो, जसका कारण आफुआफुमा लडाइ गर्दा राणा शासनको उदय भयो । राणाहरुको पनि गुटबन्दीका कारण राणाशासन पनि समाप्त भयो । प्रजातन्त्रको उदयपछि २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म अन्यौल देखियो । २०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुवाता भयो, तर स्वार्थ गाँसिएका कारण निर्दलिय व्यवस्थाको शुरुवात भयो ।
जुन व्यवस्थामा समेत गुटबन्दी भएका कारण तत्कालिन महेन्द्रले ल्याएको निर्दलीय व्यवस्था पनि समाप्त भयो । २०४६ सालमा लोकतन्त्र आयो तर त्यसपछि पनि २०६२/०६३ मा अर्को आयो । नेपालको इतिहासमा कसैलेपनि जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । आफ्नो समुहका लागि मात्रै काम गरिरहेका छन, केही समय टिकेका छन् । अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारले समेत राम्रो काम गर्न सकेन भने जान्छ ।
– गाउँमा जुन काम गर्नुभएको छ, आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्नुभएको छ । एसियाको नोवल पुरस्कार समेत मानिने म्यागासेसे पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । तपाईले मानसम्मानका लागि नबोलाउन भन्नुभएको रहेछ । तपाईको जीवनमा किन यस्तो मोडहरु आइरहेको छ त्यसोभए ?
पहिलो कुरा सम्मानको कुरा भयो । मैले सम्मानका लागि काम गरेकै होइन । मैले विद्यार्थीहरुलाई भनिरहेको हुन्छु, सम्मान अगाडिबाट होइन, पछाडिबाट आउँछ । सम्मान पाउन काम गर्नुपर्छ अनि सम्मानले पछ्याउँछ । सम्मान सही हो भने पछाडिबाट आउँछ । अगाडिबाट आउने सम्मान नक्कली हुन्छ । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पाएँ, त्यसले केही पनि गर्दैन । धेरै भयो सम्मान मलाई सम्मान दिएर बढी काम गर्ने नदिए काम नगर्ने होइन ।
त्यसैले अलि युवाहरुलाई देउ भन्छु । मलाई चाँहिएन । यहाँ त सम्मानका लागि मात्रै स्थापना भएका कैयौँ संस्थाहरु देखेको छु । जहाँसम्म राष्ट्रिय आविष्कारको कुरा छ । यो मेरो जीवनको अन्तिम निष्कर्ष हो । अहिलेसम्म गाउँमा २८ वर्ष काम गरेको मैले सिकेको एउटै ज्ञान हो त्यो । २५ वर्ष नेपालमा बसेर काम गरेर सिकेको एउटै कारण पत्त लगाए । नेपाल गरीब हुने कारण पत्ता लगाएँ ।
नेपाल गरीब हुनुको कारण विश्व बैंक वा जोसुकैले सोधपत्र निकालेपनि मुख्य कारण चाँहि फरक छ । हामी गरीब हुनुको कारण, आर्थिक रुपमा समृद्ध नबनेको कारण नेपालीहरुको संस्कार वा दिमागमा अनुसन्धान वा आविष्कार भन्ने सोचाई नै छैन । हामी नेपालीहरुमा कुनैपनि जमानामा कुनै चिजलाई वैज्ञानिक रुपमा अनुसन्धान वा आविष्कार गर्ने सोच छैन । जसका कारण हामीहरु जिन्दगी चलाउन खेतिपाती मात्रै गर्ने विषयमा अल्झिरहेका छौँ ।
भर्खर २०/२५ वर्ष त भयो नेपालीहरु विदेश जाने आउने गरेको । काठमाडौँकै बागबजार लगाएतका स्थानमा जताततै खेतैखेत मैले देखेको हो । काठमाडौँमा नेवारबाहेक अरु कोही थिएनन् । सबै खेतीपातीमा मात्रै लागिरहेका थिए । जुन मैले देखेको हो । सबैले गुजारामुखी जीवनमा बाँचिरहेका थिए । किनभने संस्कार नै त्यही थियो, खेतीपाती गर्थे, धेरै उब्जा हुने धनी थिए, थोरै उब्जाउने गरीब थिए । व्यापार व्यवसाय केही थिएन । त्यो अबस्थामा कसैले व्यवसायीक रुपमा अनुसन्धान आविष्कार गरेर त्यसलाई व्यापारीकरण गर्ने भन्ने सोच कसैको पनि आएन ।
व्यापार गर्न गाउँगाउँमा नेवारहरु डोको बोकेर जाने गर्थे । कपडा समेत आफै उत्पादन गरेर लगाउने चलन थियो । चन्द्रशमशेरको पालामा मात्रै नेपालमा विदेशबाट सामानहरु आयात गर्न थालेको हो । त्योभन्दा अघि राणाहरुले मात्रै दरबार बनाउन र विलासिताका लागि विदेशबाट आयात गर्ने गर्थे । राणाहरुले विदेशी बस्तु नेपाल ल्याउन थालेपछि बल्ल व्यापार शुरु भयो ।
१९३७ मा विराटनगरमा जुटमिल खोल्यो, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री खोलिएको थियो । राणाहरुले मधेशको काठ लैजानका लागि अमरेखगञ्ज र जनकपुरमा रेल खोले । तर नेपालको आर्थिक विकासका लागि व्यापार कसैले गरेन । अनुसन्धान र विकास भन्ने कसैको दिमागमा आएन । त्यसका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलिएको हो ।
– यसका लागि जुन प्रविधि, प्राविधक दक्ष जनशक्ति के के तपाईको प्राथमिकतामा पर्छ र तपाई कसरी जुटाउनुहुन्छ ?
अनुसन्धान र विकास भनेको विश्वविद्यालय खोल्ने भनेको होइन । अहिले हामीले खोलेको विश्वविद्यालय हैन । जसको नयाँ आइडिया फुरेको हुन्छ नि त्यसलाई स्याहार सम्भार गर्दा व्यापारीकरण गर्न सकिन्छ । जस्तो अमेरिका, वेलायत लगाएतका देश विकास भएको कारण के हो भने आइडिया भएकाहरुलाई हुर्किने वातावरण बनाइदिएका कारण मात्रै उनीहरु विकसित भएका हुन् । आइडिया भएकाहरुलाई चाहिने कानून, वातावरण सबै दिनुपर्‍यो ।
२१ औँ सताब्दीको समृद्धि भनेको आर्थिक समृद्धि हो । जसका लागि यस्तो किसिमको प्लेटफर्म चाहिन्छ नै । आर्थिक विकास भन्दा व्यापारको कुरा गरौँ । आर्थिक समृद्धि भनेको पैसा कमाउने भन्ने हो । पैसा नकमाइकन कुनै पनि देश धनी बन्न सक्दैन । जतिपनि समृद्ध देश भन्छौँ नि उनीहरु पैसा कमाएर भएका हुन् । त्यसका लागि व्यापारीकरण गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि पैसा आउँछ । ६० वर्षअघि नेपालभन्दा गरीब थियो, कोरिया । उनीहरुले आविष्कारमा सकेजति बल लगाए । मरुभुमिका रुपमा रहेको इजरायल बनेको पनि त आविस्कार गरेर त हो नि ।
मेरो जेठाबा सिङ्गापुर मलायमा काम गर्दा सिङ्गापुर र मलायामा सबै जंगल मात्रै थियो भन्थे । सिङ्गापुरमा माछा मारेर बेच्थे अनि खान्थे । किन यसरी उनीहरु विकसित बने ? ५०/६० वर्षमा कसरी विकसित बने उनीहरु । ३० वर्षमा चीन कसरी समृद्ध भए । के कुरालाई टेकेर समृद्ध भए, यो लाटो आँखाले समेत देख्ने कुरा हो । उनीहरु जे गरे हामीले पनि विकास गर्न त्यही गर्नुपर्छ ।
– कस्तो छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको प्रारम्भिक अबस्था ?
महावीर पुन भनेको आफुसँग पैसा पनि नभएको र वैज्ञानिक नभएको भनेर धेरै पिएचडी होल्डरहरुले भनेको सुनेको छु । मैले भने गरेको छु– कसैको पनि संस्कार छैन, नेपालमा केन्द्र कसैले पनि नचलाएका कारण कसैलाई पनि थाहा छैन । मैले पनि अमेरिकामा पुगेर विश्वविद्यालय शिक्षा पढेर आएको हो ।
मैले पनि कुनै विश्वविद्यालयको काम गरेर त आएको हैन । तर हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिती कस्तो छ भने काम गर्ने सिक्दै जाने हो । सिक्नका लागि समय लाग्छ । अहिले हामीले गरिरहेको काम भनेको मकैको गेडा रोपेका छौँ । त्यो गेडा उम्रियो । अहिले २/४ वटा पातहरु पलाएको छ ।
– ग्रामिण क्षेत्रमा तपाईले जुन कामको शुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यो अहिले पनि चलिरहेको छ ?
मैले अघि भने, देश गरीब हुने कारण मैले पत्ता लगाएँ । देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने आविष्कार गर्ने संस्कार बसाल्न पर्‍यो । दशैँ मनाउने संस्कार कुन जमानामा शुरुवात भएको थियो अहिले पनि निरन्तर छ नि ! गाउँघरमा समुदायका लागि काम गरेँ, मैले २५ वर्षमा सिकेको कुरा के भने नेपालमा अहिले सबै मानिस गुमराहमा रहेको जस्तो देखेको छु । धेरै नागरिकहरु अहिले कडा परिश्रम गरेर देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर लागिरहेका छन् । धेरै मान्छेहरु राम्रो देश बनाउन लागिरहेका छन् । तर समाजसेवा गरेर स्कूल बनाइदिने, बाटोघाटो बनाइदिने, अस्पताल बनाइदिएर देश समृद्ध बनाउने भनेर लागिरहेका छन् ।
सरकारलेसमेत त्यही भनेको छ । सामाजिक काम गरेर देश कहिले पनि समृद्ध बन्दैन । स्कूल बनाइदियो भने वरीपरीका मान्छेहरुले पढ्न पाउँछ, अस्पताल बनाइदियो भने उपचार हुन्छ, खानेपानी ल्याइदियो भने त्यसले पनि सुबिधा हुन्छ । त्यो त सुबिधा भयो समृद्ध भएन । सुविधा भनेको समृद्धि होइन । सरकारसमेत भौतिक पूर्वाधार बनाएर समृद्ध बनाउँछु भनेर लागिरहेको छ यो उदेकलाग्दो कुरा छ । अहिले एउटा गाउँपालिकाका लागि वार्षिक रुपमा बजेट २०/२५ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । त्यो सबै पैसा भौतिक पूर्वाधारमा जान्छ ।
– अनि कसरी हुन्छ त देश समृद्ध ?
मेरो भनाइ के हो भने देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार नभई नहुने काम हो तर त्यो भनेको ५० प्रतिशत काम हो । समृद्ध बनाउने अभियानको बाँकी ५० प्रतिशत काम भनेको देशमा उद्योगधन्दा वा बस्तुहरु उत्पादन गरेर व्यापारीकरण गर्नुपर्छ । सामसुङले कोरियाको जिडिपीको २० प्रतिशतजति ओगटेको छ । देश सृमद्ध बनाउन व्यापारीकरण हुनुपर्‍यो । व्यापारका लागि बस्तु उत्पादन गर्नुपर्‍यो ।
त्यसका लागि मान्छेहरु पनि चाहिए । दिमाग भएको मान्छेहरु राख्नका लागि ठाउँ त चाहियो, त्यो आविष्कार केन्द्र हो । अहिले नेपालमा कसैलाई केही नयाँ आयडिया आयो भने कहाँ गएर बनाउने कुनै ठाउँ छैन । सरकारी र गैरसरकारी तवरमा कुनैपनि स्थान छैन । आविष्कार केन्द्र त उदाहरणका लागि मात्रै गरिएको हो, देशैभर यस्ता केन्द्र हुनुपर्छ ।
सबै पुरस्कार बेचिसकेको छु । त्यही भएर अहिले मैले सबैलाई थर्काउँछु, पुरस्कार नदेउ दियौ भने मैले बेच्दिन्छु भनेर । म्यागासेसे पुरस्कार पनि २ वर्षदेखि बेच्नका लागि राखेको छु । त्यो पैसा आविस्कारका लागि प्रयोग गर्नका लागि हुन्छ भनेर त्यो गरेको हो ।
– तपाईको केन्द्रमा केही नयाँ पुस्ताका मान्छेहरु आएका छन् त आविस्कार गर्छु भनेर ?
त्यो त अहिलेसम्म आविष्कार केन्द्रमा १६/१७ किसिमका कामहरु भइराखेको छ । प्रपोजल पनि उत्तिकै मात्रामा आइरहेका छन् । तर हामीकहाँ आएका प्रपोजल हेरेर उद्यमी बन्ने सर्तमा मात्रै काम गर्न भन्छौँ । अहिले स्कूल कलेजका विद्यार्थीहरु पनि आएका हुन्छन् । आएकाहरुलाई हामीले ४ वटा हिसाबले सहयोग गछौँ, सेलेक्सन कमिटिले छानेपछि सहयोग दिन्छौँ । पहिलो प्रोटोटाइपिङ स्टेज भन्छ्न, आइडिया टेस्ट गर्ने स्टेजमा काम गर्नुपर्छ । परीक्षण गर्दा जेजे चाहिन्छ त्यो सहयोग दिन्छौँ । राम्रो आइडिया ल्यायो भने पैसाको जिम्मा हामी लिन्छौँ ।
अहिले जति हामीकहाँ काम भइरहेको छ, १ लाखदेखि १६ लाखसम्म सहयोग गरेका छौँ । जबसम्म नेपालमा आविष्कारका लागि पैसामा कन्जुस्याइ हुन्छ नि त्यहाँ कहिले पनि समृद्धिको सपना नदेखे हुन्छ । आविस्कारका लागि नेपालीहरुले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्दैनौँ । पूजापाठ गर्ने कुरा, मन्दिर बनाउने कुरामा हामी सामाजिक रुपमा खर्च गर्न तयार छौँ, तर आविष्कारका लागि नेपालीजति कन्जुस संसारमा कोही पनि छैन होला । दोस्रो स्टेज भनेको स्रोत साधन सबै उपलब्ध गराउँछौँ । अहिले हामीले आफ्नै स्रोतबाट डेढ करोडको सामान किन्दैछौँ ।
त्यो सब भयो भने बस्तु उत्पादन हुन्छ । विश्वव्यापारीकरणको अहिलेको अबस्थामा राम्रो र सस्तो बस्तु उत्पादन गर्न सहयोग गछौँ । त्यसलाई व्यापारीकरणका लागि लगानीकर्ताकोसमेत हामी जोहो गरिदिन्छौँ । चार तहको जुन स्टेज छ त्यो नेपालमा गर्नैपर्छ, जुन सजिलो छैन, तर गार्‍हो पनि छैन । आविष्कार भनेको १०/१५ प्रतिशत मात्रै सफल हुन्छ । आविष्कार केन्द्रले गर्न खोजेको यही हो, कतिसम्म गर्नसक्छौँ ।
– म्यागासेसे पुरस्कार पाएको तपाईको सामान्य जीवनशैली छ, समाजका लागि सन्देश दिन खोजेको हो कि ?
म बाल्यकालदेखि ३३ वर्षसम्म सुबिधा भनेको देखिएन । दुःख सुख जीवनयापन भयो । अलिहति सुख सुबिधा भोगेको भनेको अमेरिका बस्दा हो । सुखसुबिधा भनेको मनले सोच्ने कुरा हो । कसैलाई ठूलो बङ्लामा बस्न नपाउँदा सुख सुबिधा भएन भन्ने लाग्नसक्छ । जुन मनले सोच्ने कुरा हो । धनसम्पत्ति भन्ने कुरा केलाई र कति सम्पत्तिलाई पर्याप्त भन्ने त्यो सोच्ने कुरामात्रै हो । नेपाल आर्थिक रुपमा मात्रै गरीब भएको हो । अरु कुरामा गरीब छैन । संस्कृति, भाषा, धर्म प्राकृतिक स्रोत सबैमा धनी छ नेपाल । नेपाल गरीब भएको पैसा नभएर हो ।
पैसा कमाउन उद्यमी बन, आविस्कार गर भनेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा पैसा कमाउन मैले उक्साइरहेको छु । आफु पनि बन, देशको पनि विकास गर, अहिलेजस्तो नेपालीहरु विदेशमा गएर दुःख पाउन नपरोस् भनेर उक्साइरहेको छु । मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म जीवन चलाइयो, अब किन चाहियो पैसा । मपनि सुविधाभोगी हुनुपर्‍यो भने मैले पनि काम गर्नुपर्‍यो नि । पैसा भनेको काम नगरी हुँदैन, मैले व्यवसाय गरेर पैसा कमाउनुपर्‍यो, तर व्यवसायतिर लागेभने यताको काम कसरी गर्नसक्छु मैले ? एकतिर त लाग्नुपर्‍यो ।
मैले कुनै काम गरेर धेरै पैसा कमाए भने कार किनौला २/४ वटा, आलिसान घर बनाउँला । तर संसारको सबैभन्दा राम्रो होटेलमा पनि बसेको छु, जेट प्लेन पनि चढेको छु, मिठोमिठो चिज पनि खाएको हो । त्यसकारणले अनुभव लिइसकेको छु संसारको सबै सुबिधाको ।
सबै कुरा भोगेका कारण म आफैले आफैलाई भारी बनाउन नचाहेको हो । सकेसम्म हलुङ्गो भएर हिड्न खोजेको हो । मैले अस्ती पनि भने धेरै पुरस्कार नदेउ भनेको कारण पनि त्यही हो ।
धेरै सम्मान पाएँ भने सबैले धेरै सम्मान दिएको मान्छे भन्छन् अनि फेरि मलाई सबै ठाउँमा बोलाउँछन् बेकारमा मेरो समय वर्वादीमात्रै । त्यही भएर मैले जिन्दगीको अन्तिम चौथाई भागलाई किन तडगभडग भएर हिड्नपर्‍यो भन्ने लाग्छ । मेरो २ वटा छोरी र श्रीमती पोखरामा बस्छन्, घर त बनाइन, श्रीमतीले छोरीहरुको हेरचाह गर्छिन् । केही कुराको दुःख छैन ।
– म्यागासेसे पुरस्कारप्रति तपाईको धारणा चाँहि के छ नि ?
तपाईलाई थाहा छ कि छैन, मैले पाएको सबै पुरस्कार बेच्न भनेर अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोमा केटाहरुलाई बेच्न भनेको छु । सबै पुरस्कार बेचिसकेको छु । त्यही भएर अहिले मैले सबैलाई थर्काउँछु, पुरस्कार नदेउ दियौ भने मैले बेच्दिन्छु भनेर । म्यागासेसे पुरस्कार पनि २ वर्षदेखि बेच्नका लागि राखेको छु । त्यो पैसा आविस्कारका लागि प्रयोग गर्नका लागि हुन्छ भनेर त्यो गरेको हो ।खवरहब